XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Puntland ay wado qorshe culus oo ay ku soo xero gelineyso xubno ka tirsan Somaliland?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Puntland ay wado qorshe culus oo...
Garoowe (Halqaran.com) – Warar lagu kalsoonyahay oo ay helayso mareegta Halqaran.com ayaa sheegaya, in dowlad goboleedka Puntland ay waddo qorshe cusub oo ay dooneyso in ay ku soo xero geliso saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland, kuwaasi oo ka soo jeeda gobolka Sanaad.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo xukuumadiisa, xildhibaano ka tirsan barlamaanka Puntland iyo maamulka gobolka ayaa doonaya inay sii xoojiyaan soo xero gelinta shaqsiyaadka huray gacanta Somaliland.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Dhoore oo ka tirsan barlamaanka Puntland lagana soo doorto gobolka Sanaag oo wax laga waydiiyey joogitaanka guddoomiyaha gobolka Sanaag ee Badhan ayaa sheegay in uu ku yimid arrin qoys.
Wuxuu kaloo xildhibaan Dhoore uu sheegay in ay horay u soo xero geliyeen rag katirsanaa Somaliland, haddana aysan doonayn inay xabad iyo xoog wax walba ku wajahaan arrinta guddoomiyahana uu ku jiro guddoomiyaha gobolka Sanaag.
qorshe halis ah
soo xero gelin
xubno ka tirsan